SUDAN: Al Bashiir oo markii ugu horeysay Maxkamada lasoo taagay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / SUDAN: Al Bashiir oo markii ugu horeysay Maxkamada lasoo taagay
SUDAN: Al Bashiir oo markii ugu horeysay Maxkamada lasoo taagay
Madaxweynihii hore ee dalka Sudan Gen.Cumar Al Bashir ayey maxkamadeyntiisa maanta oo Isniin ah ka bilaabatay magaalada Khartuum ee caasimada wadanka Sudan.
Maxkamada ayaa bilowday Kiiska la xariira Musuq Maasuqa oo lagu soo oogay hogaamiyihii dalka Sudan kasoo talinayey 30kii sano ee lasoo dhaafay kaasi oo xilka laga tuuray bishii April ee sanadkan.
Xeer illaalinta dowlada Sudan ayaa sheegtay in Guriga Cumar Al Bashir laga soo helay in ka badan 7.8 milyan oo dollar oo lacag ah, waxaa sidoo kale la sheegay inuu qirtay Cumar Al Bashir inuu lacag ka helay Dowlada Sacuudiga lacagtaasi oo si gaar ah loo gacan geliyey Al Bashiir.
In ka badan 90 milyan oo dollar ayaa la sheegay in dowlada Sacuudiga ay shaqsiyan siisay Cumar Al Bashiir, waxaana la sheegay in lacagtaasi qeybtii ugu danbeysay oo gaareysay 25 milyan oo dollar ay keentay diyaarad khaas ah oo u soo diray Dhaxalsugaha Maxamed Bin Salman. Dhamaan lacagahan ayaan lagu shubin khasnada dowlada balse si gaar ah u isticmaalay Gen. Al Bashir.
Waxaa xusid muddan in qodobada loo cuskaday kiiskan ay ku jiraan sharuucdii uu soo rogay isla Cumar Al Bashiir bilowgii sanadkan 2019 oo ay kamid ahayd in qofna uusan gurigiisa ku heysan karin lacag badan oo ah nooca qalaad, waxaana usii dheer qodobada kale ee ah inuu si musuq maasuq ah uu isticmaalay lacago uu ka helay dowlado shisheeye iyo hantida Qaranka Sudan.